A place to say something: March 2007
Google Talk Gadget ဆိုတာက သင့် Webpage တစ်ခုခုပေါ်မှာ Google Talk ကို Run လို့ရအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Script လေးပါ။ အဲဒီ Script လေးကို သင့် Website မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Blog မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Google Home Page မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်ထားရုံနဲ့ သင်ဟာ Google Talk Light Version အဖြစ် ဘယ် Computer မဆို Gtalk Install မလုပ်ဘဲ သုံးနိုင်ပါပြီ။
Google Talk Gadget Home Page
Google Talk Gadget Sample Html Page
Posted by ko ye at 10:39 AM2comments
Vista မှာပါတဲ့ IE7 ဟာ တစ်ချို့သော Flash Content websites (e.g YouTude.com) တွေမှာ Flash Player Install လုပ်ပါဆိုပြီး Error ပေးတတ်ပါတယ်။ Adobe website မှာ Flash Player Download Page ကိုသွားကြည့်ပြန်တော့လဲ Flash Player Succefully installed ဆိုပြီး flash banner ကိုမြင်ရပြန်ရော။
ဒီ Error ကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင် တော့ ...
၁။ C:\_Windows\_System32\_Macromed\_Flash ကို သွားပါ။
၂။ FlashUtil9b.exe ကို Run ပါ။
၃။ An update to your adobe flash player is available ဆိုပြီး ပေါ်လာတဲ့အခါ Install ကို Click လိုက်ပါ။
၄။ Windows ကို Restart လုပ်ပါ။
အဲဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်တော့ Vista က IE7 ဟာ Flash Content Website တွေကို ကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရသွားပါပြီ။ အရင်က မလုပ်တတ်လို့ Firefox သုံးလိုက်ရသေးတယ်။ ခုတော့ သားသားစားချင်တာစားလို့ရပြီ... အဲ.. သားသားသွားချင်တာသွားလို့ရပြီ :)
Posted by ko ye at 10:02 AM3comments
အရင်လက ရန်ကုန်ပြန်သွားတော့ ညီဖြစ်သူက ပြောတယ်..
သူတို့ကျောင်းက Computer တွေမှာ Folder Option မရှိတော့ဘူးတဲ့။ ရှိရှိသမျှ Anti-Virus တွေရော Ad-Ware တွေရော သုံးပြီး ရှာတာ နောက်ဆုံးတော့ ကတုံး(Format)ပဲ တုံးလိုက်ရတယ်တဲ့။
အဲဒီ Virus ကတော့ Flashy ပါပဲ။ အဲဒီ Flashy Virus ရှိတဲ့ PC ကို USB Flash Drive လေးထည့်လိုက်တာနဲ့ သူဟာ USB Drive ထဲကို ၀င်ပြီး ရှိပြီးသား Folder Name တွေနဲ့တူတဲ့ Virus file လေးတွေ ပွားပေးပါတော့တယ်။ ရှိပြီးသား Folder တွေကိုတော့ Hidden File လုပ်လိုက်ပြီး Folder Option Menu ကိုပါ ဖျောက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ Windows Task Manager မှာကြည့်ရင် Flashy.exe Run နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး သူ့ကို End Task လုပ်ရုံနဲ့ သေမသွားပါဘူး။
သူ့ကို အသေသတ်နိုင်တဲ့ Flashy Fix ကို NOD32 က Release လုပ်ပေးထားပါတယ်။
ဒီမှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Posted by ko ye at 4:35 PM0comments
Labels: Downloads, Virus
အတွေးအခေါ်လေးတွေ တော်တော်ကောင်းပါတယ်... ရီစရာလဲ အလွန်ကောင်းပါတယ်...
Episode6ထဲက စာသားလေးတွေပါ။
and if you lie in it too long,
They are more fun when they have air in them.
And if you poke them withapin,
Free Time ရှိမယ်ဆိုရင် http://clearification.com မှာသွားကြည့်လိုက်ပါ။ စိတ်ဝင်စားသွားလိမ့်မယ် :)
Posted by ko ye at 3:05 PM0comments
စင်္ကာပူ Nanyang Polytechnic မှာ ပညာသင်နေကြတဲ့ ကျောင်းသားများရဲ့ သင်္ကြန်စာပါ။
သေချာဖတ်ကြည့်... ရှူရှူးထွက်အောင် ရယ်ရလိမ့်မယ် :D
သင်ဟာ စင်္ကာပူမှာ နေတဲ့သူဆိုရင်တော့ သူတို့ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာ မတွေးကြည့်ဘဲသိနိုင်ပေမဲ့ ... အခြားနိုင်ငံမှာ နေတယ်ဆိုရင်တော့ စင်္ကာပူက သူငယ်ချင်းနဲ့ တူဖတ်ကြည့်ပြီး ပြုံးပျော်နိုင်ကြပါစေ...။
Download NYP သင်္ကြန်စာ
Posted by ko ye at 3:28 AM0comments
Posted by ko ye at 10:17 AM3comments